कसरी आइपीएल २०२० १ 13 औं सत्र समाप्त भयो?
तपाइँ सबै आईपीएल २०२० को बारेमा जान्नु आवश्यक छ
राजा डेनिश 11.03.2021
को 13th आईपीएल को मौसम सबै समयको सब भन्दा रमाइलो ofतु मध्ये एक हो, लगभग सबै टोली द्वारा प्रशस्त रेकर्डको साथ। को आईपीएल २०२० सीजन सपना ११ स्पोर्ट्स सट्टेबाजी प्लेटफर्म द्वारा प्रायोजित हो; प्रायोजकहरूको शीर्षक लगभग २२२ करोडमा खरिद गरियो र जुन उल्लेखनीय रकम हो। मौसम-उद्घाटन १ September सेप्टेम्बर १ 18, २०२० को लागि निर्धारित गरिएको थियो; मिति धेरै असामान्य थियो किनकि अन्य मौसमहरू अप्रिलमा भयो।
त्यहाँ आठ फ्रान्चाइजी थियो जसले आईपीएल २०२० मा भाग लिएको थियो, र लगभग हरेक टीमले सत्रमा केही रेकर्ड राख्यो। तल आईपीएल २०२० को पूर्ण ब्रेकडाउन छ; यदि तपाईंले यो हराउनु भयो भने, तपाईंको पक्षमा राख्नुहोस्, र SWOT विश्लेषणमा सिधा जम्प गर्नुहोस्।
आईपीएल २०२० को स्थल र तालिका
आईपीएल संयुक्त अरब अमीरातमा १ September सेप्टेम्बर २०२० मा सम्पन्न भएको थियो। यो मिति अपरिचित लाग्न सक्छ किनकि आईपीएलको अघिल्लो सत्रहरू अप्रिल महिनामा मात्र निर्धारित गरिएको थियो। आईपीएलको मार्चमा योजना बनाइएको थियो, तर यो केही प्रमुख कारणका लागि स्थगित गरियो। बीसीसीआईले आयोजना गर्न केहि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ आईपीएल तालिका अर्को देशमा। श्रीलंकाले आफ्नो काउन्टीमा आईपीएल आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको थियो तर प्रतियोगिताको आयोजना गर्न सकेन।
टुर्नामेन्टमा कोविड १। को प्रभाव
एकमात्र प्राथमिक कारण किन आईपीएल २०२० ढिलाइ भएको थियो COVID-19 हो। महामारीको प्रायः सबै देशका पक्षहरुमा गम्भीर प्रभाव परेको छ। महामारीको कारणले विश्वभरि एक तंग लकबडाउन जान्छ जुन त्यो मुख्य कारण हो आईपीएल लाइभ अप्रिल र मार्च महिनाको समयमा तालिकाबद्ध गरिएको थिएन। बीसीसीआईले खेलाडीहरूलाई भाइरसबाट सुरक्षित राख्नको लागि प्रशस्त सावधानी अपनायो। सत्रको अवधिमा केवल कोभिड १। परीक्षणमा करीव १० करोड खर्च गरियो। २०,००० कोविड - १ tests परीक्षणहरू सम्पूर्ण टूर्नामेन्ट भरमा आयोजित गरिएका थिए।
लगभग १० चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिताको थालनी हुनु अघि पनि सकारात्मक परीक्षण गरिएको थियो। किनभने कोविड १aएक घातक भाइरस हो, मुम्बई इन्डियनहरूले त्यहाँ स्मार्ट खेले। प्रत्येक टीमका खेलाडीलाई मुटुको धडकन ट्र्या ringिक रिंग प्रदान गरिएको थियो, त्यसैले यदि कुनै पनि खेलाडीमा कोविड -१ of को कुनै लक्षण छ भने, तिनीहरूले रोग निको पार्न उचित उपायहरू लिन सक्दछन्।
सीजन मा लगभग सबै फ्रन्चाइजी द्वारा अविश्वसनीय रेकर्ड
टोलीसँग विडम्बना यो हो कि आईपीएलको उच्च स्कोर र आईपीएलको सम्पूर्ण इतिहासको सब भन्दा कम रन यस टीमले मात्र बनाए। ढाँचा सत्र २०२० मा फेरि देखा पर्‍यो। टोलीले सनराइजस हैदराबादको बिरूद्ध ठूलो स्कोर खडा गर्यो। अर्को लगातार खेलमा, समूहले टोली किंग्स IX पंजाब विरुद्ध खराब प्रदर्शन गर्‍यो।
चेन्नई सुपर राजाहरू
टोली यसको लगातार प्रदर्शनका लागि परिचित छ किनकि यो हरेक सत्रको हरेक प्लेअफको लागि योग्य थिए जुन उनीहरूका थिए। टोली सत्र २०२० मा प्लेफ्सको लागि पनि क्वालिफाई गर्न खराब तरीकाले असफल भयो। टोली आईपीएल २०२० को समग्र बिन्दु तालिकामा सातौं स्थानमा थियो। टिम हराइरहेको थियो। समूहका सबै भन्दा अनुभवी खेलाडीहरू थिए सुरेश रैना र हरभजन सिंह। थाल्ल्यावासले खेल जित्नको लागि कडा सled्घर्ष गर्यो।
किंग्स नवौं पंजाब
राम्रो zienta र केहि अन्य सहभागीहरूको स्वामित्वमा रहेको टोली अर्को टोलीको बीच सब भन्दा मनपर्ने टोली हो। जे होस्, टोलीले कप्तानत्वसँगै धेरै मुद्दाहरूको सामना गर्यो, सुरुबाट युवराज सिंह लाई KL राहुल। टीम लगभग हरेक मौसम मा कप्तान परिवर्तन भएको छ। ११ कप्तानहरू फ्रान्चाइजीको सम्पूर्ण क्यारियरमा परिवर्तन गरिएका थिए। यद्यपि कप्तान र कप्तानको रूपमा केएल राहुलको प्रदर्शन एकदम राम्रो छ, र केएल राहुल आगामी सीजनमा समूहका कप्तान हुनेछन् भनेर पूर्वानुमान गरिएको छ।
यस टोलीले सेट गरेको रेकर्ड एकदम स्पष्ट छ किनकि यसले सम्पूर्ण आईपीएल इतिहासमा सबै भन्दा धेरै आईपीएल शीर्षक जित्यो। १ 13 सत्रहरू मध्ये, उनीहरूले times पटक जितेका छन् जुन उल्लेखनीय संख्या हो, वर्तमान कप्तान हो रोहित शर्मा, जो महान फाराममा छ, र टोलीका अपेक्षाहरू अपार छन्।
जयपुरमा आधारित फ्रान्चाइजीले रन चेजको कलामा महारत हासिल गरेको छ र सफल रन चेजमा धेरै रेकर्डहरू छन्। टोलीले किंग्स नवौं पंजाबको बिरूद्ध २२3 रनको पछाडि २२। रन बनाए जुन six विकेट थियो। संजु सैमसन, खेलाडी जसले टूर्नामेन्टमा निरन्तर प्रदर्शन गर्यो, यस खेलमा केहि चमत्कारहरू गर्‍यो।
चार टीमहरू जुन प्ले अफमा पुगेका थिए आईपीएल २०२० कार्यक्रम रोयल चेलेन्जर बंगलोर, मुम्बई इन्डियन, दिल्ली क्यापिटल, र सनराइजस हैदराबाद थिए। पहिलो क्वालिफाइंग टोलीसँग सधैं फाइनल पुग्न दुई अवसरहरू हुन्छन्। पहिलो क्वालिफायर दिल्ली क्यापिटल र मुम्बई इन्डियनको बिच खेलाइएको थियो, र मुम्बईमा आधारित फ्रान्चाइजीले यो खेल जित्यो।
एलिमिनेटर राउल रोयल चैलेन्जर ब Bangalore्गलोर र सनराइजस हैदराबाद बीच खेलाइएको थियो, जुन टोली एसआरएचले जितेको थियो, जसले स्वायत्त रूपमा दोस्रो क्वालिफायर कथन गर्‍यो। यो एसआरएच र डीसी बीच खेलाइएको थियो, जुन टीम दिल्ली राजधानीले जित्यो।
भारतीय प्रिमियर लिग २०२० को फाइनल
प्रतियोगिताको फाइनल उल्लेखनीय खेलहरू मध्ये एक हो। खेल भर प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा गर्दन थिए। फाइनल दुई फ्रान्चाइजीहरू बीच खेलाइन्थ्यो जसले खेल भर बिन्दु तालिकामा शासन गर्थे। रोहित शर्माको नेतृत्वमा रहेको मुम्बई इन्डियन्स र श्रेयस लेरको नेतृत्वमा दिल्ली क्यापिटलको बीचको शोडाउनले लाखौं मानिसहरूलाई आफ्नो न nails काट्यो। मुम्बई इन्डियन्सले १ run6 रनको पछाडि सफल cha विकेट तल १ 157 रन बनाउँदै १ run6 रनको जीतमा पाँचौं आईपीएलको उपाधि जित्यो। टोलीसँग अझै वालेटमा आठ बलहरू बाँकी थियो।
आईपीएल २०२० को बिन्दु तालिका अनुसार टोलीको अन्तिम श्रेणीकरण
को आईपीएल पोइन्ट टेबल:
१ मुम्बई इन्डियन्स
२ दिल्ली क्यापिटलहरू
Sun. सन राइजर्स हैदराबाद
Royal. रोयल चुनौती बंगलोर
Kolkata. कोलकाता नाइट राइडर्स
Punjab. पंजाब राजा
Chennai. चेन्नई सुपर किंग्स
Rajasthan. राजस्थान रॉयल्स
अन्तमा, भारतीय प्रीमियर लीग एक रमाइलो टूर्नामेन्ट थियो र प्रत्येक खेलमा प्रशंसकहरूलाई goobasps प्रदान गर्दछ। सत्र सेप्टेम्बरमा संयुक्त अरब एमिरेट्समा निर्धारित गरिएको थियो; चलिरहेको महामारीका कारण टन सावधानी अपनाइएको थियो। अन्तमा शीर्षक एक फ्यान-मनपर्ने मुम्बईमा आधारित फ्रान्चाइजीले समात्यो जुन मुम्बई इन्डियन्स हो, र ट्रफी जितेर टिमले सर्वाधिक संख्यामा रेकर्ड राखेको छ। आईपीएल ट्राफियां.
मुम्बई इन्डियन्स: आईपीएलको अग्रणी टीमको गहन विश्लेषण!
मुम्बई इन्डियन्स: आईपीएलको अग्रणी टीमको गहन विश्लेषण! 12.03.2021
दिल्ली क्यापिटलहरू - यस आईपीएल टोलीसँग सम्बन्धित विस्तृत विश्लेषण! 12.03.2021
आईपीएल २०२१ लिलामी - सबै समयको सबैभन्दा रमाईलो लिलामी 14.03.2021